ချစ်ကြည်အေး: ဇမ္ဗူတဝှမ်းမှာ လှူဒါန်းမဲ့သူတွေ....အောင်ပါစေ
ဘယ်သူ ရှိရဦးမလဲ၊ ဒီသတင်းကို ကိုရေခဲတို့အိမ် အမှတ် ၁၀၄/ဈ အရောက် ဦးဦးဖျားဖျား သယ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့သူက ကိုရေခဲရဲ့ တဦးတည်းသော ရှုမငြီးတဲ့ ချစ်ဇနီး "ပါလေရာမူမူ"ပေါ့။ ပါလေရာမူမူဆိုတာ ကိုရေခဲကရော ရပ်ကွက်ထဲကပါ သူ့ဇနီးကို ချစ်စနိူးပေးထားတဲ့ နာမည်။ ရပ်ကွက်ထဲ မူမူ မသိတာ မရှိ၊ နေရာတကာ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် ပါတတ်လွန်းသူမို့ အမည်ရင်း မူမူမြင့်ကနေ ပါလေရာမူမူလို့ တွင်ခဲ့တာ။
ပြောရမယ်ဆို မူမူ့ရဲ့ အဲသည်လို နှံ့စပ်မှုကြောင့်လည်း ကိုရေခဲတို့မိသားစု ဝမ်းမီးငြိမ်းကြရတာ။ ဘယ်...ကိုရေခဲရဲ့ မူလတန်းပြကျောင်းဆရာ လစာဆိုတာ လကုန်လို့မှ လတစ်ဝက် မကျိုး သေးဘူး၊ ကုန်ပြီ။ မူမူက ဆိုသေးတာ "ကြီးပွားတိုးတက်လိုသော် ကျောင်းဆရာလုပ်ပါလို့ ဘယ်လောကနီတိထဲမှာမှ မပါဘူး ကိုရေခဲကြီးရဲ့" တဲ့။ မူမူ့နှယ်...ခက်လိုက်တာ။ ကျောင်းဆရာရဲ့ပီတိကို ကျောင်းဆရာတွေမှပဲ သိတော့မှာ။ ကိုရေခဲကတော့ မူမူနဲ့ ပြိုင်ပြော မနေပါဘူး။ ပြောလည်း သူရှုံးမှာ သိနေတာကိုး။ မူမူက ကျောက် ရုပ်တောင် ခေါင်းညိတ်အောင် ပြောနိူင်စွမ်းတဲ့မိန်းမ မဟုတ်လား။
ရပ်ကွက်ထဲမှာရော၊ အနီးအနား တခြားရပ်ကွက်တွေအထိပါ အိမ်ခြံမြေ ရောင်းချင် ဝယ်ချင်သ လား၊ အိမ်ဂရန် ပေါင်ချင်သလား၊ ဘိုးဘွားပိုင် ကြေးလင်ပန်းကြီး ရောင်းစွံချင်တာလား၊ ဟိုး မင်းတုန်းမင်းကြီး ခြေနင်းကနေ မင်းသားဒွေးကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ အသုံးအဆောင်တွေအထိ ဝယ်ချင် သလား၊ ရတယ်။ မူမူနဲ့သာ ဆက်သွယ်လိုက်၊ အားလုံးအဆင်ပြေစေရမယ်။ သို့ပေမဲ့ မူမူ့ခမျာ ပါးစပ်ပွဲစား ကြားပွဲစားသာဖြစ် တာမို့ ရောင်းသူဝယ်သူ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ပေးသလောက် သဒ္ဒါကြေးကလေးလောက် စားရရှာတာ။ ကိုယ်ပိုင်ငွေ အရင်းအနှီး ထုတ်ထုတ်ထည်ထည်လေး ရှိလို့ကတော့ မူမူ့ ပါးရည်နပ်ရည်၊ လုပ်ပုံကိုင်ပေါက်နဲ့ဆို မူမူတို့ နားပေါက်ကြီး ချဲ့ရတာ ကြာလှပေါ့။
ကိုရေခဲတို့အိမ်မှာ အပ်ချုပ်စက်အဟောင်းလေးတစ်လုံးရှိတော့ သမီးအကြီးမက ဈေးက ညှပ်ပြီးသားအထည်လေးတွေ ယူချုပ်တယ်။ စက္ကူအိတ် ခေါက်တယ်။ သူ့ကျောင်းမုန့်ဘိုး သူ့ဘာသာ ရှာသုံးနေတာ၊ မိဘဆီက လက်ဖြန့်တောင်းခဲတယ်။ အိမ်မှာ အငယ်ကောင် တစ်ယောက်ပဲ လူလားမမြောက်၊ အလုပ်မလုပ်တဲ့သူရှိတယ်။ သူက ဒီနှစ် ခြောက်တန်း တက်မှာ။ သမီးကြီးက ကိုးတန်း၊ နောက်နှစ် ဆယ်တန်းတက်ရင်တော့ အကြီးမကို ဘာအလုပ်မှ မလုပ်စေဘဲ ကျောင်းစာထဲ စိတ်နှစ်လုပ်ဖို့ ဖိအားပေးရတော့မှာ။ မတတ်နိူင်ပါဘူး၊ သမီးကြီး အသုံးစားရိတ်ဘိုး သူပဲ ပိုရှာရတော့မှာပေါ့။ သူများတွေလို အိမ်မှာကျူရှင်ဖွင့်ရင် အတန်အသင့် ပြေလည်မှာ သိပေမဲ့ အဲဒီအဖြစ်ဟာ သူ့ရဲ့ မူလ တန်းပြ ကျောင်းဆရာဆိုတဲ့ အဖြူအစိမ်းဝတ်တစ်ကိုယ်ကို ကျူရှင်ဆရာ ဆိုတဲ့ နောက်တစ်ကိုယ်က သစ္စာဖောက်လိုက်သလို ခံစားမိတယ်။ သူ့အတွေးကိုသာ မူမူသိနိူင်ရင် "ရှင်နဲ့တော့ ခက်ပါတယ် ကိုရေခဲရယ်" ပဲ ပြောဦးမှာ။
ခုလို အိမ်ရှိလူကုန်ရဲ့ လေးပုံသုံးပုံ အလုပ်လုပ်ကြတာတောင် တစ်ပတ်မှာ အသားဟင်း နှစ်ရက် ဆိုတာ ဖြစ်ဖြစ်မည် စားကြရတာ။ အသားဟင်းသာဆိုရတာပါ၊ အာလူးထဲ ကြက်သား ရော ချက်တာလား လို့ မေးရလောက်အောင် နာမည်ပျက် အသားဟင်းပါပဲ။ ကလေးတွေ ဆိုတော့ လည်း သွေးသားကောင်းကြတဲ့ အရွယ်တွေမို့သာ ဘာနဲ့စားစား ဝင်တာ၊ စားသလောက် အသားဖြစ်ကြ တာ။
ဒီတော့ ဒီတစ်ခါ မူမူယူလာတဲ့ သတင်းက ကိုရေခဲတို့မိသားစုအတွက် အတော်လေး အူမြူး၊ အူစိုစေမဲ့ သတင်း။ အို သူတို့ မိသားစုတင် မဟုတ်ပါဘူးလေ၊ အရှေ့ အနောက် တောင် မြောက် အရပ်လေးမျက်နှာ မှာရှိတဲ့ ခုနှစ်ရက်သားသမီးအားလုံး ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြမဲ့ သတင်းပါ။ ခုလောက်ရှိ မူမူ့ပါးစပ်သတင်းနဲ့တင် ကုတို့ဆိပ် မှို့အိတ်ပွင့်သလို တရပ်ကွက်လုံးနားထဲ လျင်မြန်တဲ့ အဟုန်နဲ့ ပြန့်နှံ့နေလောက်ပြီ။
လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလလောက်ကမှ ရပ်ကွက်ထဲ ပြောင်းလာတဲ့ သူဌေးအိမ်က အိမ်တက်မင်္ဂလာ ဆွမ်းကျွေးလုပ်မဲ့ သတင်း။ ဒီသတင်းအထိကတော့ ဘာမှ အူမြူးစရာ မရှိပေဘူးပေါ့။ ထူးခြားတာက သူဌေးအိမ်တက် ဖိတ်ပုံပဲ။ သူဌေးမို့လို့ဆိုပြီး ရေမွှေးဖိတ်စာတွေ ဘာတွေ လုပ်မနေဘူး၊ လမ်းလေးခွဆုံမှာ ဘလက်ဘုတ်ကြီးထောင်ပြီး စာရေးဖိတ်တာ။ "အိမ်တက်မင်္ဂလာ စတုဒီသာအလှူ" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့၊ စတုဒီသာဆိုကတည်းက အရပ်လေးမျက်နှာမှ ဆိုတော့ အလှုရှင်ရဲ့ သဒ္ဒါစိတ်ကို ခန့်မှန်းနိူင်ပြီ။ အယုတ် အလတ် အမြတ်မရွေး မည်သူမဆို ဝင်ရောက် သုံးဆောင်နိူင်ပါသည်၊ လက်ဆောင်ပေးခြင်း သည်းခံပါလို့ ဆိုထားပြန်တော့ကာ ဒီခေတ်ကြီးထဲ ဒီလိုအလှုမျိုး ရှားပေတယ် ဆိုရမယ်။
ကိုရေခဲဖြင့် မူမူပြောတဲ့သတင်း ကြားတာနဲ့တင် မျက်နှာကြီးပြုံးလို့၊ သာဓု အကြိမ်ကြိမ် ခေါ်မိတော့ တာ။ သူဌေးအိမ်ရှေ့ လမ်းပေါ်မှာ မဏ္ဍာပ်ထိုးကျွေးမှာမို့ စားနေရင်းက ကိုယ့်သားရေဖိနပ်လေးများ သူများစွပ်သွားမလားဆိုပြီး လည်ပင်းဆန့်ကြည့်စရာ မလိုတဲ့ အလှူ၊ အိမ်တက်ဆိုပေမဲ့ လက်ဆောင်ပေးခြင်းလည်း သည်းခံပါဆိုတဲ့ အလှူ၊ ဒါမျိုးတော့ ကိုရေခဲတို့က အတော်ကို သည်းခံနိူင်တယ်ဆိုတာ ပြောစရာတောင် လိုမယ် မထင်ဘူး။ ပြီးတော့ ဧည့်ခံကျွေးမွေးမဲ့ ဟင်းအမည်တွေတောင် ရေးထားလိုက်သေးဆိုပဲ။ ဝက်သားအိုးကြီးနှပ်၊ ကြက်သား ဆီပြန်၊ ငါးသလောက်ပေါင်း၊ ချဉ်ပေါင်စပ်ချဉ်ဟင်းရည်၊ အစိမ်းကြော်၊ ပဲကြီးနှပ်၊ ငါးပိ တို့စရာစုံနှင့် ဧည့်ခံပါမည် တဲ့။
ကဲ ဒါလောက် ချီးမွမ်းသင့်တဲ့အလှူ ဘယ်မှာရှိသေးလို့တုန်း။ သူဌေးလင်မယား သူတို့ရပ်ကွက်ထဲ တွဲရက် မြေနှစ်ကွက် ဝယ်လိုက်ပြီး နှစ်ထပ်တိုက်ကြီး ဟီးထနေအောင် ဆောက်နေတုန်းကတည်း က လူတွေက စိတ်ဝင်စားလှပြီ။ သို့သော် မေးငေါ့လို့၊ မျက်စောင်းထိုးလို့ ဆိုတဲ့ စိတ်ဝင်စားပုံမျိုး။ သူဌေးက အသားဖြူဖြူ၊ မျက်ခွံအစ်အစ် မျက်ပေါက်ကျဉ်းကျဉ်း၊ စိနတိုင်းသားတို့ရဲ့ ရုပ်ရည်၊ လူက သိတ်တော့အဝကြီးထဲက မဟုတ်ဘူး။ သူဌေးကတော်က ခပ်ငယ်ငယ် ချောချော၊ သူဌေးရဲ့ စပွန်ဆာမလေးဆိုလား ပြောကြတာပဲ။ ခုတော့ ဇနီးအသစ်စက်စက်ကလေးပေါ့လေ။ သူဌေးက ရိုးရိုး ချမ်းသာလာတာ မဟုတ်ဘူးတဲ့၊ သမာအာဇီဝသမား မဟုတ်ဘူးတဲ့ ပြောကြပြန်တယ်။ ခုတော့လည်း လူတွေက ဒီလိုအလှူမျိုးအတွက် သဒ္ဒါတရားတော့ ကောင်းရှာသားလို့ သူဌေးအပေါ် အမြင်လေးနဲနဲ တည့်စပြုလာတယ်။ ကိုရေခဲကတော့ ဘာရယ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ သူ ဘာ လုပ်စားလို့ ချမ်းသာ ချမ်းသာ၊ မုဒိတာ ပွားရုံပေါ့၊ သူ့တရားနဲ့သူပေပဲ။ သူ စမောလေးယူထားတဲ့ ကိစ္စဆိုတာကလည်း သူ့မယားကြီး ကိစ္စမဟုတ်လား။ ခုလို လှူတန်းဖော်ရတာကပဲ သူတော်ကောင်းနှလုံးရှိလို့ဆိုတာ အသိသာကြီး။
ကိုရေခဲတို့တအိမ်လုံးလည်း အိမ်တက်အလှူ သွားစားကြရမဲ့အရေးပဲ လက်ချိုးရေတွက်ရင်း ကြိုတင် ပါးစပ်အရသာ ခံနေလိုက်ကြတာ။
"မမ မောင်လေးကတော့ ကြက်သားဆီပြန်ကို ပေါင်တုံးကြီး ရွေးစားမှာ မမရော"
"ငါလား ငါက အကုန်စားမှာပဲ ဝက်သား၊ ကြက်သား၊ ငါးသလောက် အကုန်နဲနဲစီ ဟိဟိ ဖေကြီး ဖေကြီးရော"
သမီးကြီးက သူတို့မောင်နှမ စကားဝိုင်းထဲ ဖအေလုပ်သူကိုပါ ဆွဲထည့်တော့ သူ့မလည်း ခပ်မြန်မြန် စဉ်းစားရင်း ပြန်ဖြေရတယ်။
"ဖေကြီးက ဝက်သားကြိုက်တော့ ဝက်သား အိုးကြီးနှပ် အဝစားမယ်ကွာ"
မူမူကတော့ သူတို့သားအဖတတွေ ဖြစ်နေပုံကို သည်းသည်းလှုပ်လှုပ် ဖြစ်ရန်ကော၊ အကဲပိုရန် ကော ဆိုတဲ့ မျက်နှာပေးနဲ့ လှမ်းကြည့်နေလေတယ်။ ကိုရေခဲနဲ့ အကြည့်ချင်းတစ်ချက် အဆုံမှာတော့ နှစ်ယောက်လုံး မသက်မသာလိုလို၊ ဝမ်းနည်းဝမ်းသာလိုလို အတိအကျပြောပြ မရနိူင်တဲ့ မချိပြုံးလေး ကိုယ်စီ ပြုံးမိကြတယ်။ ဘာသာမပြန်တတ်ရင်သာ နေမယ်၊ အဲဒီအပြုံးကို သူတို့ချင်း ကောင်းကောင်းနားလည်တယ်။ ဟင်းကောင်းကျွေးကောင်းနဲ့ဝေးနေတဲ့ သူတို့ သားသမီးလေးတွေအပေါ် ကြီးစွာသော ဂရုဏာတွေသက်ရင်း ကိုယ့်လက်ရှိအနေအထားကို အားမလိုအားမရဖြစ်မိတဲ့ အပြုံးမျိုး။ ဒါပေမဲ့လည်း သူတို့ဟာ ကိုရေခဲနဲ့ မူမူမြင့်သာ ဖြစ်တယ်။ သူဌေး ဦးဟုတ်ကြည်နဲ့ သူဌေးကတော် ခွန်းချိုကြည်မှ မဟုတ်တာဘဲကိုး။
"ဟယ် မိုးဖွဲလေးတွေ ကျလာပြီ ဖေကြီးရေ"
"အေးပါ သမီးရယ် ဖေကြီးတို့ ခဏလေး စောင့်လိုက်ကြတာပေါ့၊ ငါ့သားလေးရော ဆာပြီလားကွ"
သားငယ်က မျက်နှာလေးရှုံ့ပြီး သူ ဆာနေပြီဆိုတဲ့ပုံ ဖအေကိုပြတယ်။
"ကဲ ဒါဆိုလည်း သွားကြတာပေါ့ အမေကြီးနဲ့သားလေးက ထီးတစ်ချောင်း၊ ဖေကြီးနဲ့ သမီးက ထီးတစ်ချောင်းစီနဲ့ သွားကြမယ်၊ ဟုတ်ပြီလား"
"ဘာ ကိုရေခဲရယ် ကိုင်းကျိုးနေတဲ့ ရှင့်ချာလီထီးကြီးနဲ့တော့ မလိုက်ခဲ့ပါနဲ့၊ ရှက်စရာကြီး၊ အလှူမှာက လူပေါင်းစုံ အယုတ်၊ အလတ်၊ အမြတ်မရွေးလာကြမှာ အထင်သေးမခံနိူင်ပါဘူး။ မူမူနဲ့သား အရင်သွားမယ်၊ ရှင်တို့ သားအဖ မဆာကြသေးဘူး မဟုတ်လား၊ မူမူတို့ ပြန်လာမှ မူမူ့ထီးယူပြီး အဖေကြီးတို့ သွားကြပေါ့"
"ဟေ... အင်း၊ အေးလေ ဒါဆိုလည်း မူတို့ အရင်သွားစားကြ"
ကိုရေခဲဆိုတာကလည်း မိန်းမများ မကြောက်ဘူးမှတ်လို့လားဆိုတဲ့ အစားထဲက၊ မူမူ စီစဉ်သမျှ အကောင်းချည်း လုပ်လာခဲ့လိုက်တာ အိမ်ထောင်ဦးကတည်းက ခုထိပဲ ဆိုပါတော့။ ဒီတော့ မူမူ့ စကားအတိုင်း မိသားစုလေးယောက် နှစ်သုတ်ခွဲ ထွက်ကြရမယ်ပေါ့။ တစ်နာရီလောက် ကြာချင် ကြာနိူင်မှာဆိုတော့ သားအဖနှစ်ယောက် တီဗီလေး ဖွင့်ကြည့်ရင်း မူမူတို့သားအမိ ပြန်အလာကို စောင့်နေလိုက်တယ်။
တကယ်တမ်းကျတော့ တစ်နာရီတောင် မကြာပါဘူး၊ မူမူတို့ သားအမိ ပြန်ရောက်လာကြတယ်။ လက်ထဲမှာလည်း တစ်တောင်နီးပါးရှည်တဲ့ ရွှေငှက်ပျောသီး နှစ်လုံးကို တယုတယကိုင်လို့။
"အမယ်လေး ချမ်းသာတဲ့လူတွေများကျတော့လည်း အချိုစားဖို့ အလှူပြန် ရွှေငှက်ပျောသီး တစ်လုံးစီ ပေးလိုက်သေး၊ ကျွေးလိုက်တာကလည်း တကတည်း အလျှံပါယ်၊ မူမူတို့များ ဘယ်တော့မှ အဲသလို လှူနိူင်မှာပါလိမ့်"
"မူမူရာ ဖြစ်လာမှာပေါ့ကွာ၊ လူဆိုတာ ဒီလိုကြီးပဲ တစ်သက်လုံး မနေပါဘူးကွာ"
"အင်း မလှူလို့ မရှိဆိုပေမဲ့ ရှိကို မရှိတော့လည်း မူမူတို့တော့ လှူဖို့ မစဉ်းစားနိူင်သေးပါဘူး၊ ကဲပါ ရှင်တို့ သားအဖ သွားစားကြတော့၊ ဟဲ့ သားငယ်လေး သားမမကို ထီးပေးလိုက်လေ"
"ဟ မိုးက တိတ်တောင် နေပါပြီကွာ"
"ခု တိတ်ပေမဲ့ တော်နေကြာ ရွာချင် ရွာနေဦးမှာ၊ ယူသွားစမ်းပါ ကိုရေခဲရယ်၊ ပြီးရင် ရှင်တို့ သားအဖ ရွှေငှက်ပျောသီးတစ်လုံးစီ ယူခဲ့ကြဦးနော်။ မနက်ဖြန် မနက်ကျမှ ဘုရားကို သုံးလုံး၊ အမေ နန်ကရိုင်းမယ်တော်ကို တစ်လုံး ဆက်ရမယ်"
သားငယ်က နှာခေါင်းလေး ရှူံ့လို့၊ မပြောရဲ မပြောသာပေမဲ့ သူ့အမေ အပိုင်စီးထားတဲ့ သူ့ရဲ့ ဝေစု ရွှေငှက်ပျောသီးတစ်လုံးအတွက် မကြေလည်ပုံ ဖအေလုပ်သူကို လှမ်းပြတယ်။ ကိုရေခဲလည်း မူမူ မမြင်အောင် သားငယ်ကို မျက်စေ့တစ်ဘက် လှမ်းမှိတ်ပြလိုက်ရတယ်။ ဒါများ ဖေကြီးတာဝန် ထားလိုက်စမ်းပါ ဆိုတဲ့ သဘော။
အင်း...မူမူပြောလည်း ပြောချင်စရာ၊ အလှူက တကယ့်ကို စေတနာပါတဲ့ အလှူ။ ချဉ်ရည်ဟင်း လိုက်တဲ့သူ၊ ထမင်း လိုက်တဲ့သူ၊ ဟင်းဖြည့်ပေးတဲ့သူတွေဆိုတာ လွန်းပြေးနေသလိုပဲ။ ကိုရေခဲရှေ့က လူဝကြီးဆို ထမင်းလေးပန်းကန် ကုန်ပြီ။ ဝက်သားပန်းကန်ကိုလည်း သူ့ဘက်ချည်း ဆွဲဆွဲခပ်နေတော့တာ။ ကိုရေခဲက အပြုံးလေးနဲ့ ကိုယ့်ဘက်ပြန်ဆွဲရင်း ပန်းကန်ထဲ စားနိူင်သလောက် ပုံထည့်ပြီး လူဝကြီးဘက် ပြန် တွန်းပေး လိုက်တယ်။ သမီးက နှစ်ပန်းကန်စားပြီး လက်ဆေးဖို့ ထသွားတယ်။ ကိုရေခဲပန်းကန်ထဲမှာလည်း ထမင်းကုန်ပြီ။ ဗိုက်ကလည်း ဘယ်လိုမှ မဆန့်တော့တဲ့ အနေအထား။ သမီးကြီးက ငှက်ပျောသီးအတွက် တန်းစီနေရာက ဖအေကို လက်ယပ်လှမ်းခေါ်နေပြီ။ ကိုရေခဲ ပန်းကန်ထဲကျန်နေတဲ့ ဝက်သားသုံးထပ်သား အိအိလေးတစ်တုံးကို အစာပိတ်အဖြစ် ကောက်ဝါးရင်း အပြီးသတ်လိုက်တယ်။
ရွှေငှက်ပျောသီးက ကုန်ပြီ။ ကံကောင်းချင်တော့ ကိုရေခဲနဲ့ နောက်ကတစ်ယောက်ပဲ ရွှေငှက်ပျောသီး ရလိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးက သုံးယောက် မရလိုက်ဘူး။ အဲဒီ နောက်ဆုံး သုံးယောက်ထဲမှာ လူဝကြီးလည်းပါတယ်။ ဘာရယ်မဟုတ်ပေမဲ့ ကိုရေခဲ ကြိတ်ကျေနပ်သွားတယ်။ ခြင်္သေ့လည်ပြန်ကြည့်ရင်း တိုက်ပွဲ တစ်ရာအောင်နိူင်သူ အပြုံးမျိုးနဲ့ လူဝကြီးကို ပြုံးကြည့် နှုတ်ဆက် ပြန်ခဲ့လိုက်တယ်။
အိမ်ရောက်တော့ သမီးကြီးက သူ့အမေလက်ထဲ ရွှေငှက်ပျောသီးနှစ်လုံးကို အောင်မြင်စွာ တာဝန်ကျေအပ်နှံပြီး နောက်ဖေးခန်းလေးထဲ အဝတ်လဲဖို့ ဝင်သွားတယ်။ ဒီတော့မှ တီဗီ ကြည့်နေတဲ့ မူမူ့ဘေးနား အသာလေးဝင်ထိုင်ပြီး မူမူ့လက်မောင်းလေးကို ညှစ်ရင်း ပြောလိုက် တယ်။
"မူမူရာ အမေနန်ကရိုင်းကို ကို တောင်းပန်ပေးပါ့မယ်၊ သားငယ် ရွှေငှက်ပျောသီး စားချင်နေ တဲ့ဟာ၊ ကလေး ပေး စားလိုက်ပါကွာ။ ကိုယ်တို့ဘာသာလည်း ဝယ်ကျွေးနိူင်တာမှ မဟုတ်တာ"
"ကိုကလေ ကလေးတွေကို ကြပ်ကြပ် အလိုလိုက်"
ပြောရင်းက မျက်လုံးချင်းအဆုံမှာ ပြုံးခဲ့ဖူးတဲ့ မချိပြုံးလေးတစ်ခုကို နှစ်ယောက်လုံး သတိရ သွားကြတယ် ထင်ပါရဲ့။ မူမူ စိတ်ပြောင်းသွားတယ်။
"သားငယ် စားပွဲပေါ်က အုပ်ဆောင်းအောက်မှာ ရွှေငှက်ပျောသီးတစ်လုံး ယူလိုက်နော်သား၊ ခုစားဖို့ မဟုတ်ဘူးနော် ကြားလား၊ မနက်ဖြန် ကျောင်းယူသွားပြီး စားဖို့"
မအေစကားမှ မဆုံးသေးဘူး၊ ဟေးကနဲ အော်သံနဲ့ သားငယ်က စားပွဲနားရောက်နေပြီ။
"ကိုရေ မူ အပြင်သွားဦးမယ်၊ အရောင်းအဝယ်လေးတစ်ခု ပြောထားတာရှိလို့"
"အေး အေး မိုးမချုပ်စေနဲ့နော် မူ၊ မိုးချုပ်မယ်ဆိုရင် ဖုန်းအိမ်ကို လှမ်းခေါ်ပြောလိုက်၊ ကို လမ်းထိပ်ကို လာကြိုမယ်နော်"
"အင်းပါ ကိုရဲ့၊ သမီးကြီး မေမေ့ကို ထီးလာပေးစမ်း"
"ထီးက ဖေကြီးဆီမှာလေ မေမေရဲ့"
"ဟာ သမီးကို ဖေကြီး ပေးထားတယ်လေ၊ အလှူမှာ ထမင်းစားကြတုန်းက"
"အာ ဖေကြီးက လုပ်ပြီ၊ သမီးလက်သွားဆေးတော့ စားပွဲပေါ်မှာ၊ ဖေကြီးဘေးနားမှာ ထားခဲ့တယ် လို့ ပြောတယ်လေ"
ကျွတ်...ခုမှ ကိုရေခဲ ခေါင်းတွေ ထူပူသွားတယ်။
မူမူ့စိတ်ဆိုးသံကြီးထဲမှာ ကိုရေခဲ ခေါင်းတွေ ပူသွားတာမှ မီးပဲ ထတောက်တော့မလို။
"အာ...မူမူ ခဏလေးနော် မူမူ၊ ကို ခုပဲ သွားပြန်ယူပေးမယ်"
"ဟာ လုပ်ပြီကွာ၊ ဒီလောက် လူပေါင်းစုံလာကြတဲ့ဟာ ဘယ်လိုလုပ် ပြန်ရနိူင်ပါ့မလဲလို့"
"အေးပါ၊ အေးပါကွာ ခဏလေး စောင့်နေပါ၊ ကို သွားပြေးရှာကြည့်ပါဦးမယ်"
ခြင်ထောင်ကြိုးတန်းပေါ်မှာ လွှားတင်ထားတဲ့ ရှပ်အင်္ကျီလေး ကမန်းကတန်းစွတ်ရင်း လမ်းမပေါ် ကိုရေခဲ အပြေးတစ်ပိုင်း ထွက်လိုက်တယ်။ စိတ်ထဲကလည်း ဘုရားတရားမလို့ ပြန်တွေ့ပါစေ၊ ဘယ်သူမှ ယူမသွား ပါစေနဲ့၊ တွေ့ရင်လည်း တစ်ယောက်ယောက်က သိမ်းထားပေးပါစေ လို့ ဆုတောင်းရင်းနဲ့ပေါ့။
လူက အလှူမဏ္ဍပ်နားမရောက်ခင် မလှမ်းမကမ်းမှာပေမဲ့ ကိုရေခဲမျက်လုံးတွေကဖြင့် အလှူမဏ္ဍပ်အထဲကို ရောက်နှင့်နေပြီ။ ကိုရေခဲဖြင့် ဘာမှမပြောရသေးဘဲ ထီးပျောက်တာများ သိနေကြလို့လား မပြောတတ်ဘူး၊ မဏ္ဍပ်ထဲမှာ လူတွေ စုရုံး စုရုံး၊ ကုန်းကုန်းကွကွနဲ့ ဟိုရှာဒီရှာ ရှာဖွေနေကြတဲ့ပုံ။ မဏ္ဍပ်အထဲခြေလှမ်းမိတော့မှ မျက်စေ့မျက်နှာပျက်ပျက်နဲ့ ခုံတလုံးမှာ ထိုင်နေတဲ့ သူဌေးကတော် ခွန်းချိုကြည်ကို သတိထားမိတယ်။ ဘာများဖြစ်လို့ပါလိမ့်။ အနားကလူကို မေးကြည့်မယ်အလုပ် အိမ်ပေါ်ကဆင်းလာပြီး မဏ္ဍပ်ထဲ လှမ်းဝင်လာနေတဲ့ သူဌေးကို တွေ့တာနဲ့ ခဏရပ်ရင်း သူဘာပြောမလဲ နားစွင့်နေမိတယ်။
"ခွန်းချိုရယ် ဒီလောက်လည်း ဝမ်းနည်းမနေပါနဲ့၊ အလှူပေါ် အလှူဆင့်တယ်ပဲ သဘောထားလိုက်၊ လူတွေ အားနာစရာ"
"ကိုကြီးကလည်း ဒီလက်စွပ်က စိန်က ရှေးစိန်တွေ၊ ပြီးတော့ ခွန်းချို ကြိုက်လို့၊ ကိုကြီး အမှတ်တရ ပေးထားတဲ့ဟာ"
"အေးပါကွာ၊ ကိုကြီးသိပါတယ်၊ ကိုကြီး အဲဒီစိန်မျိုးရအောင်ပြန်ရှာဝယ်ပေးမယ်၊ ဟုတ်ပြီလား"
"ဟင့် ဒါပေမဲ့ အဲဒါက အသစ်ပဲဟာ၊ ခွန်းချိုက အရင်စိန်ဟောင်း တလုံးထဲလေးကိုပဲ မက်မောတာ၊ ကိုကြီးမာမားဆီက လက်ဆင့်ကမ်းရတာဆို ကိုကြီးပဲ ပြောပြီး"
"အေးလေ၊ ဒါများ မာမားဆီကလိုချင်လည်း တောင်းပေးမယ်၊ မာမားဆီမှာ ဒါမျိုး အများကြီး ဟုတ်ပြီလား"
ဒီတော့မှ သူဌေးကတော်မျက်နှာ ပြုံးချိုသွားလိုက်ပုံများ။ ပြီးမှ ထိုင်နေရာက ထရပ်၊ သူဌေး လက်မောင်းကို ခပ်နွဲ့နွဲ့လေး မှီတွဲရင်း အိမ်ဘက်ပြန်လျှောက်သွားကြတော့တယ်။ ဪ... သူဌေးကတော် လက်စွပ်ကစိန် စွန်ကုတ်ချောင်လို့ ပြုတ်ကျပြီး ပျောက်သွားတာကိုး။ ဒီတော့မှ ကိုရေခဲလည်း လာရင်းကိစ္စ သတိရသွား တယ်။
"ဒီမှာဗျာ ဟိုနားက ခုံပေါ်မှာ ထီးတစ်ချောင်းများ မတွေ့မိကြဘူးလားဗျာ"
ကိုရေခဲအသံကြားတော့ ခုထိ စိန်ပျောက်မှုကို ကြက်မြေကြီးယက်သလို ထိုးကော်ရှာနေကြတဲ့ လူတွေက ခက်တဲ့လူပဲ၊ ဒီမှာ သိန်းကျော်တန်တဲ့စိန်ကို ရှာနေတာဗျ၊ ခင်ဗျားထီး ဘယ်သူက သတိထားမိမတုန်း ဆိုတဲ့မျက်နှာပေးမျိုးနဲ့ တစ်ချက် မော့ကြည့်ကြတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့အချင်းချင်း တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ကြတယ်။ ပြီးတော့ ကြက်ယက် ဆက်ယက်ကြပြန်တယ်။ အေးလေ ရေအဆုံး ကုန်းတစ်ဝက်ဆိုတယ် မဟုတ်လား။ တော်သေးရဲ့၊ ကြက်ယက် ယက်နေတဲ့လူတွေထဲမှာ ဟိုလူဝကြီးမပါလို့။ နိူ့မို့ဆို လူဝကြီးရဲ့ တန်ပြန်အပြုံးဟာ ကိုရေခဲရဲ့ နှလုံးသားကို နင်းချေနိူင်လောက်တယ်။ ကိုရေခဲ သိလိုက်ပါပြီ။ သွားပြီ၊ မူမူ့ထီး ပြန်မရနိူင်တော့ဘူး။
အိမ်အပြန်လမ်းပေါ်မှာတော့ လေးလိုက်တဲ့ ခြေထောက်တွေဆိုတာ ခေါင်းပေါ်တင်ထမ်းပြီး လျှောက်နေရသလိုပဲ။ ခက်တာက မူမူ့ကို ဘယ်လိုပြောရပါ့။
အိမ်နားနီးလာနေပြီ၊ ဒါပေမဲ့ မူမူ့ကို ဘယ်လိုနှစ်သိမ့်ရမလဲ စဉ်းစားလို့ မရနိူင်သေးဘူး။ "သူဌေးကတော်လည်း မူ့လိုပဲ ပစ္စည်းပျောက်သွားတာ၊ သူက စိန်တလုံးကျပျောက်သွားလို့တဲ့ဟေ့" လို့ ပျောက်ဖော်ညှိပေးရမလား။ "စနေနံ ထီး ထွက်သွားတာ ကောင်းတယ်သာမှတ်ပါ မူရာ"လို့ အားပေးသလိုလို ပြောရမလား။ "သူများတွေ အလှူကြီးပေးနေတုန်းမှာ ပျောက်တာ၊ မူ့ထီးလည်း လှူလိုက်တယ်လို့သာ သဘောထားလိုက်ပေါ့ကွာ" လို့ ပြောရင်ကောင်းမလား။ စဉ်းစားလိုက်ရတာ ကိုရေခဲနဖူးမှာ ချွေးတောင်စို့တယ်။ ဒါမှမဟုတ် "မင်းထီးကြီးက ဟောင်းနေပါပြီ၊ ကို အဲဒီလို ထီးမျိုးရအောင်ရှာဝယ်ပေးမယ်၊ ဟုတ်ပြီလား" လို့ ဦးဟုတ်ကြည်စတိုင်ဖမ်းပြီး ပြောရင်ကောင်း မလား...
ဟာ...ဒါတော့ မဖြစ်နိူင်ဘူး ထင်တာပဲ။ ဒီထီးက ဝယ်ချင်တိုင်းဝယ်လို့ရတဲ့ ထီးမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ကိုရေခဲတို့ လမ်းထိပ်မှာ ရှေးဟောင်းပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်လေး တစ်ဆိုင် ရှိတယ်။ ဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ခြံတစ်ခြံကို မူမူရောင်းပေးတုန်းက ဈေးကောင်းရလိုက်တာမို့ ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ ပွဲစားခ ပိုက်ဆံအပြင် အဲဒီထီးကိုပါ လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာ။ ပြီးတော့ ထီးရဲ့ရာဇဝင်ကို ပြောပြလိုက် သေးတယ်။ တခါက ဂျပန်အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းလေးတစ်ခု သူတို့ဆိုင်မှာ လာဝယ်ရင်း ပါလာတဲ့ပိုက်ဆံ မလောက်လို့ "ဒီထီးယူထားလိုက်ပါ၊ ဒီထီးက ဂျပန်တစ်နိူင်ငံလုံးမှာမှ ဂျပန်အိမ်ရှေ့မင်းသားရဲ့ ကြင်ယာတော်နဲ့ သူ့ဆီမှာ ၂ချောင်းပဲ ရှိတာ"လို့ ပြောခဲ့သတဲ့။ ဟုတ်တာ မဟုတ်တာ အသာထား၊ မူမူတို့က လူစုံပြီဟေ့ဆို သူ့ထီးရဲ့ ရာဇဝင်ကို မမောနိူင် မပန်းနိူင် ဂုဏ်လုပ် ပြောဆိုလေ့ရှိတာ။
ခုတော့ ကိုရေခဲအဖြစ်က ရာဇဝတ်အိုးကိုမှ တုတ်နဲ့ ထိုးမိတဲ့အဖြစ်။ အိမ်ရှေ့နားအရောက် ဝါးကပ် ခြံစည်းရိုးလေးကို ကျော်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ မူမူရယ် အိမ်ရှေ့ ဖိနပ်ချွတ် လှေကားရင်းမှာ ထိုင်လို့။
"ဘယ်လိုလဲ ကိုရေခဲ မူ့ထီး ပြန်မရခဲ့ဘူး မဟုတ်လား"
ကိုရေခဲကတော့ မုန့်တီသည်မျက်ခွက် ကြက် မကြည့်ဝံ့ ဆိုတာလို မူမူ့ကို မကြည့်ဘဲ ခေါင်းကိုသာ ငုံ့ရက်က တွင်တွင်ခါပြနိူင်တော့တယ်။
"အီး ဟီးဟီး မူ့ထီးလေး ပျောက်ပြီပေါ့ ဟီး ဟီး...ဟင့်"
မူမူတစ်ယောက် ခါတိုင်းလို ပါးစပ်ပေါက်ပေါက်ဖောက်တော့မယ် ထင်ထားတာ။ ခုတော့ ဘယ်လိုမှ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်လို ငိုချလိုက်ပုံကြောင့် ကိုရေခဲမှာ အံ့အားကြီးကိုသင့်လို့။ မူမူ့ရဲ့ ထီးကလေးအပေါ် စွဲလန်းနှစ်သက်စိတ်ကို ကိုရေခဲ သိခဲ့ပေမဲ့ အဲဒီလောက် မထင်ထားခဲ့ ဘဲကိုး။ မသကာ သူနားညည်းရုံလောက် မြည်တွန်မယ်၊ စိတ်ကောက်မယ်ပဲ ထင်ခဲ့တာ။
"မငိုပါနဲ့ မူမူရာ ကို ထီးအသစ် ပြန်ဝယ်ပေးမယ်နော်"
"နှစ်လ သုံးလပဲစောင့် ဟုတ်ပြီလား"
"ကို ကျောင်းက စုမဲထုတ်ဖို့ ပေါက်ထားတာလေ၊ အဲဒါ နောက်နှစ်လကျရင် ကို့အလှည့် ပိုက်ဆံရမှာ "
မူမူကဖြင့် အင်းမလုပ်၊ အဲမလုပ် နေရာကတောင် မရွေ့ပါဘူး။ ကလေး နှစ်ယောက်ကလည်း သူတို့အမေ ရာသီဥတုမကောင်းတာသိတော့ အိမ်ပြင်ကို ထွက်မလာကြဘူး။ ဒါနဲ့ ကိုရေခဲမလည်း တတွတ်တွတ် ချော့ရတော့တယ်။ ကိုရေခဲအတွက်တော့ အိမ်ထောင်သက် အနှစ် နှစ်ဆယ်နီးပါး မှာ ဒါ ပထမဆုံးအကြိမ် စိတ်လက်ရှည်ရှည် ချော့ခြင်းပဲ။
"ကဲပါ မူရာ တိတ်ပါတော့ကွာ၊ ငိုနေလည်း ထီးက ပြန်ရမှာမှ မဟုတ်ဘဲ"
"အသစ်ရချင်လို့ အဟောင်း ပျောက်တာပဲကွာ၊ လှူလိုက်တယ် လို့ပဲမှတ်"
"ဘာ!!! ဘာ လှူလိုက်တယ် မှတ်လဲ၊ လှူစရာလား၊ လှူရအောင်လို့ ရှင်က ဘာတွေများ ပိုပိုလျှံလျှံ ရှာ ပေးထားလို့တုန်း၊ သူများတွေ လှူနိူင်တယ် ဆိုတာက ယောက်ျားလုပ်သူက အပြည့်အစုံ ရှာထား ပေးလို့ လှူနိူင်တာ၊ ဘယ်မလဲ ရှင့်ရှာစာဖွေစာ၊ တော်ပြီနော် လာမပြောနဲ့၊ ခုလည်း ဒီအလှူ သွားမစားရင် ဒီလို ဖြစ်မှာမှုတ်ဘူး...၊ တော် တော် လှူဖို့ ဘာညာ လာပြောမနေနဲ့ မရှိရတဲ့ အထဲ"
ကိုရေခဲလည်း ဘယ်လိုမှ ဆက်မချော့တတ်တော့ဘူး၊ ချော့ဖို့ စကားလုံးတွေလည်း ကုန်ပြီ။ ကိုရေခဲနှယ် ဒေါသဖြစ်နေသူကိုမှ အလှူမှာပျောက်လာတဲ့ထီးကို သွားလှူခိုင်းမိတယ်။ စကားလုံး အရွေးအချယ်မတတ်တဲ့ ကိုယ့်ပါးစပ်ကိုပဲ ကျိန်ဆဲနေမိတော့တယ်။ မရှိလို့ မလှူနိူင်ပါဘူး ဆိုနေမှ။
အေးလေ ရှိတဲ့လူတွေအတွက် သူဌေးသင်္ဘောမှောက်တာထက် မရှိတဲ့သူတွေ ခွက်ပျောက်တာက ဆိုးတယ် မဟုတ်လား။ မူမူ့ခမျာ ဒီထီးကလေးနဲ့ပဲ လှုပ်ရှားသွားလာနေရရှာတာ။
ခဏကြာတော့ သူ့မိန်းမမူမူ တီဗီကြိုက်တာ ကိုရေခဲ သတိရသွားတယ်။ မူမူလည်း စိတ်ပြေအောင်၊ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတာကြီးလည်း သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာအောင် တီဗီ ထဖွင့်လိုက်တယ်။ ကိုရေခဲတို့ အိမ်က တီဗီက အိုးလ်မော်ဒယ်၊ နောက်မှာ ဘုလုံးကြီးနဲ့ ၁၄လက်မလေးပါ။ သူတို့ မင်္ဂလာဦးလက်ဖွဲ့အဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီးပေးထားတာ။ အရုပ်အသံတွေ မပေါ်လာခင် အရင်ဆုံး ခပ်စိမ်းစိမ်းအရောင်ကြီးက တီဗီမျက်နှာတစ်ပြင်လုံး ပေါ်လာတာ၊ ပြီးမှ တဖြည်းဖြည်း ပီသလာတာရယ်။
"မူရေ တီဗီကြည့်ရအောင် လာ..."
အသံက နဲနဲ စိတ်ပြေစပြုလာတဲ့အသံ။
မူမူ့ကို ခေါ်ပြီး တီဗီရှေ့မျက်နှာလှည့်ကြည့်မိတော့ ကိုရေခဲခမျာ ဟိုက်ကနဲ ဖြစ်သွားရင်း မူမူ မမြင်ခင် တီဗီကို ကမန်းကတန်း ထပိတ်လိုက်ရတယ်။
တောက်...ဒီနေ့ကျကာမှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လာနေတဲ့ အစီအစဉ်က "အလှူဒါန ပြုကြသူငါ"တဲ့
New Style-စတိုင်သစ် မဂ္ဂဇင်း-Feb-2012
မေဇင် Fri May 11, 10:03:00 PM GMT+8
ကိုရေခဲကြီး သနားပါတယ်နော် ၊ သူ့ ထီးလေး ပြန်တွေ့ရင် အရမ်းဝမ်းသာသွားမှာ....တီချစ်ကလဲ ထီး ပြန်ပေးတွေ့လိုက်ပါလားလို့း))
မြူးမြူး Sat May 12, 10:19:00 AM GMT+8
အဲ့လိုအရေးအသားမျိုးသိပ်ကြိုက်.. မနေ့ကဖတ်ပြီးသား.. ခုပြန်လာဖတ်တာ.. ဒါမျိုး ရေးတတ်ချင်ပါ့.. ရေးတတ်ဘူးရယ်..
ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) Sat May 12, 08:00:00 PM GMT+8
ဖတ်ရင်း ပြုံးမိတယ် အမရေ.. ကောင်းလိုက်တာ ဖတ်ရတာ..
SHWE ZIN U Sat May 12, 08:18:00 PM GMT+8
ချစ်ကြည်အေး ရေ စာလေး ကို သိပ်သဘောကျတယ်
San San Htun Sun May 13, 08:02:00 AM GMT+8
မမချစ်တို့ များ ရေးတတ်ပါ့
Mon Petit Avatar Sun May 13, 06:22:00 PM GMT+8
I actually read this while I was in YGN, Ma Ma, I loved it and still do.
အမ်တီအန် Fri May 18, 12:08:00 PM GMT+8
မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာပေါ်အထိ ခြေချလာတာ ၀မ်းသာမိတယ်အစ်မရေ..။
ဒီသရော်စာလေးကို စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဖတ်ပြီးသား...
အခုတစ်ခေါက် ထပ်ဖတ်ရင်း ထပ်ပြုံးသွားတယ်...
“တောက်...ဒီနေ့ကျကာမှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လာနေတဲ့ အစီအစဉ်က "အလှူဒါန ပြုကြသူငါတဲ့ ”